Buyekeza - idokhumenti ezikhethekile, equkethe ukulinganisa umsebenzi wokugcina. Uma-ke angeke zisetshenziswe kuya izifundo iziqu, uKhomishane ngeke uvumele wena ukuvikela. Ngakho, ukubuyekezwa - inqubo yokufunda ucwaningo ososayensi sendawo ethile. Lo mbhalo umuntu njengoba lombuyekezi ezaziwayo.
Ukubukeza umsebenzi wokugcina ngokuvumelana onguchwepheshe, ukhetha ngokwakho. Isimo wukuthi akufanele sisebenze emnyangweni ofanayo nomphathi wakho ngokushesha izifundo. Uma lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela mqondo ekomidini bayokwazisa, uma umbuyekezi wakho ngezinga lokufunda (kuyoba Akhethwe noma Doctor of Science).
Njengomthetho, isifundo sokugcina, izibalo zenziwa ngesisekelo idatha ibhizinisi, asebenzela kulo umfundi lidlule externship. Kule ndaba, lombuyekezi ngokuvamile iyinhloko lo mkhuba.
Uma unenhlanhla, ukubuyekeza komsebenzi wakho ezilotshwe ochwepheshe, waqinisekisa isignesha yakhe futhi isitembu ke ususa idokhumenti eqeda bese ulinamathisela iziqu ezifundweni. Nokho, umkhuba libonisa ukuthi ngokuvamile kuba umfundi yena, bese eza kuye emnyangweni izisebenzi ukuletha imininingwane edingekayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi ukuthi ukuze ubhale isibuyekezo phezu mqondo wokuthi ngezinye wokuqhuba umyalo zaphakamisa imibuzo mayelana nekhwalithi idokhumenti.
Buyekeza - yinqubo ngokubhala ukubuyekeza ngoba umsebenzi mqondo. Ulwazi olulandelayo kumele atholwe idokhumenti:
Ukuhlaziya tonkhe tigaba mqondo.
I degree of ukuhambisana yephrojekthi nazo zonke izidingo zomthetho.
Nemiphumela ethile engathandeki cwaningo.
Ukuze uthole amaphuzu aphezulu umsebenzi wokugcina, ukubuyekeza we iphrojekthi mqondo ukudala ikhomishana umbono elihle kunawo yokutadisha kwakho.
Kanjani ukuze ubhale isibuyekezo ku-mqondo
Buyekeza - akuyona umsebenzi onzima isitshudeni owabhala umsebenzi wokugcina ngokuzimela. Kumele ukwazi izimfanelo ezinhle nobuthakathaka babantu ucwaningo lwakho, kungani kungaba ukugcizelela emandla ukufihla ubuthakathaka.
iseluleko ewusizo eyokusiza ubhale isibuyekezo izinga Kuyaphawuleka ukuthi kufanele asuke imishwana ezivamile. Okungukuthi, akudingekile ukuba abhale: "Kuyinto umsebenzi omuhle", "umlobi wazibonakalisa njengenhlangano professional kakhulu," etc ...
Ukubukeza siqukethe le izigaba ezilandelayo:
Isingeniso - ukuhlolwa ukuhlobana cwaningo.
The main okuyingxenye - kokuhlaziywa kwamathenda izinzuzo, nebubi, ucwaningo, ukubuyekeza kwesigaba we ephepheni ngalinye. Lolu lwazi luvame ithatha ingxenye enkulu idokhumenti.
Yokugcina ingxenye - isiphetho ngabantu yini noma cha ukuvumela umfundi ukuvikela mqondo. Ngokuvamile, le ngxenye lifushane.
Kukhona futhi nezimfuneko ezithile zokulawula, owawuthi, futhi isibuyekezo kufanele ikhishwe.
nezimfuneko ezingokomthetho okuqukethwe
Buyekeza - inqubo okudinga ukunemba. Ngakho-ke, kukhona izici okumelwe ahlangabezane nazo kungakhathaliseki okuqukethwe idokhumenti. Lezi zihlanganisa:
Lokufuduka idokhumenti kumele singeqi 2 amaphepha A-4 usayizi.
Igama elithi "Ukubuyekeza" kufanele libhalwe ngosonhlamvukazi phakathi ikhasi.
Ngaso sonke isikhathi kufanele ucacise isihloko iziqu ezifundweni, Igama eligcwele umfundi, ubuhlakani kanye nenani iqembu lakhe.
Kuhlola ukuhlobana mqondo kumele khona isibuyekezo.
It kufanele kucwaningwe ngokubandakanya ikhono lombhali ukucabanga ngokunengqondo futhi wenze kufinyelelwe iziphetho ezinembile.
Kuyadingeka ukuba bahlole proportionality izingxenye mqondo.
Ukubuyekeza kumele afake imininingwane ngenqubekela izicelo, imidwebo, imidwebo kanye imifanekiso iziqu ezifundweni.
Kumele zinikezwe ulwazi mayelana nendlela lapho umfundi possesses the amakhono umbhalo ngesitayela ngokwesayensi.
Qiniseka ukuthi ufake ulwazi mayelana nokuthi isifundo esidayisa kungenzeka zisebenza ku umkhuba.
Kufanele ucacise amaphutha kubalulekile futhi non-abalulekile umsebenzi.
Umbhalo kufanele ukwethula igama zokuqala lombuyekezi, degree yakhe zezemfundo, umsebenzi, isignesha futhi isitembu kwenhlangano.
IKhomishana njalo uhlola kanjani umsebenzi ihlangabezana nalezi zimfuneko.
Khumbula ukuthi e kwamaphutha umsebenzi kumele kube khona. Kungcono ucacise nabo ukubuyekezwa ngaphandle Commission zikhonjwe izifundo zabo wephrojekthi yakho. Ngaphezu kwalokho, uma uyazi ukuthi kunezinto ezingekho abalulekile ngokuhamba isifundo futhi engafuni ukubhala ngakho-ke faka nemiphumela ethile engathandeki ezincane ezimbalwa, ngoba konke ukunakwa igxile kubo.
Ngemva kokubhalela Izibuyekezo ukhupha wonke umbhalo ngosuku olulandelayo ukuthola amaphutha ukuthi bayakuqaphela ngaphambili, futhi ngokushesha akuqede.
Izitebhisi ezenziwe ngemabula - inhlanganisela usizo kanye nesitayela